Archive du 20190204
Olona akaiky an-dRajaonarimampianina Nidoboka eny Antanimora i Hugues R
Nidoboka vonjimaika eny amin’ny fonjan’Antanimora ny Mpanolotsain’ny filoha teo Hery Rajaonarimampianina dia i Hugues Ratsiferana sy ny namany iray mitondra ny anarana hoe Tantely noho ny raharaha ambara fa fangalarana entana tahaka ny fanaka, solosaina,…
Fifidianana solombavambahoaka Hotanterahana amin’ny 27 mey 2019
Namoaka ny tetiandrom-pifidianana tamin`ny alalan`ny didy hitsivolana lah. 2019-56 ny avy eo anivon`ny primatiora izay miantso ny olom-pirenena ho tonga handatsa-bato amin`ny fifidianana solombavambahoaka.
CENI sy ny HCC Lasa fitaovan`olom-bitsy ve ?
Tsy mamparisika ny olom-pirenena manana zo hifidy loatra ny fanamarinana na ao anaty lisi-pifidianana 4 na tsia satria maro no mihevitra fa na iza na iza lany eo dia tsy voahaja ny safidiny.
Minisitry ny Atitany Nahavita “mission” indray
Nametraka ny dian-tanany sahady ny minisitry ny atitany, Tianarivelo Razafimandimby, taorian`ny nanendrena azy indray ho mpikambana ao anatin’ny governemanta Ntsay. Vita ny adidiny tamin`ny fampandaniana ireo volavolan-dalàna mahakasika ny fifidianana solombavambahoaka.
Politika ankapoben’ny fanjakana Ny fampiharana sisa andrasana
Nivoaka iny ny fampahafantarana amin’ny fomba ofisialy ny politika ankapobeny entin’izao fitondrana izao manatanteraka ny praograman’asany.
Andriantsizehena Benja Urbain “Mila fandaminana lehibe ny fizarana ny faritra”
Nandritra ny lahateniny tamin`ny fianianany tetsy Mahamasina, nilaza ny filoham-pirenena fa hisy ny fanovana rafitra hanakaiky kokoa ny vahoaka. Tsy ho 22 intsony ny isan`ny faritra fa ho 23 hotantanin`ireo governora.
Rantsan’ny CENI ao Ambatondrazaka Tafatsangana ny tranobe mitentina 200 tapitrisa
Trano lehibe ahitana efitra enina mintena 200 tapitrisa ariary no fotodrafitrasa voalohany vitan’ny CENI tao anatin'izay taona nijoroany izay. Ahitana efitrano fiasana ny CED sy ny CER ary ny CIR izy io.
Fanavaozana ny lisi-pifidianana Betsaka misoratra anarana eny amin’ny fokontany
Nifarana ny 31 janoary lasa teo rehefa nanomboka ny 15 janoary ny andiany faharoa tamin’ny fandefasan’ny komitim-pirenena misahana ny fifidianana ilay boky hoenti-manavao ny lisi-pifidianana haparitaka eny anivon’ny fokontany.
Tany mihotsaka Fa inona marina no mahatonga azy ?
Raha fantatra mialoha ny loza, efa noraisina ny fepetra rehetra hisorohana azy saingy vinavina sy tombatombana ihany aloha no azo atao, indrindra ny fitandremana.
Amnesty International « Mahery setra loatra ny mpitandro ny filaminana Malagasy »
Lehilahy miisa valo voarohirohy ho mpangalatra omby no namoy ny ainy tamin’ny fomba feno habibiana hoy ny amnesty international tamin’ny fanambarana nataony tamin’ny voalohany volana febroary lasa teo.
Mpampianatra mamily fiarakodia Mitaraina noho ny tsy fisian’ny “permis”
Tsy misy taratasy fahazoan-dalana mamily fiara hatrany na “permis” amin’izao eo anivon’ny centre d’immatriculateur na ny ivontoerana misahana izany.
Antsiranana May kila forehitra ny sampandraharahan’ny fananan-tany
Zava-doza no niseho tao Antsiranana ny sabotsy teo. Nirehitra ary may kila forehitra ny “Service Domaine” na ny sampandraraharaha misahana ny fananan-tany any an-toerana noho ny firehetana tsy voafaritra mazava ny antony.
Volley-Ball CCZ7 Nandresy avokoa ireo solontena Malagasy 4 omaly
Ny minisitry ny fanatanjahantena Malagasy Tinoka Roberto no nanokatra ofisialy ny fifaninanana CCZ7 « Fiadiana ny ho tompondakan’ny faritra faha-7 aty Afrika eo amin’ireo ekipa tompondaka taranja volley-ball »
Taorian’ny andro faha-7 notontosaina teny Carion tamin’ny sabotsy 02 sy alahady 03 febroary 2019 dia fantatra avokoa ireo ekipa 8 hiatrika ny lalao 1/4-dalana amin’ny sabotsy 09 sy alahady 10 febroary izao,
Loza inona foana ity e ?
Nafana tanteraka ny zava-nisy teto amin’ny firenena ny faran’ny herinandro teo.
Taolagnaro, Ihosy ary Betroka Misy mampihorohoro ny mpiasam-panjakana ambony
Misy trangan-javatra mampalahelo miseho any Taolagnaro sy Ihosy ary any Betroka fa misy olona minia mampihorohoro an’ireo tompon’andraiki-panjankana ao aminy ka mahasahy mitaky lelavola
Faritra Ihorombe Olana hatrany ny tsy fandriampahalemana
Manakoako ny tsy fandriampahalemana any Betroka noho ny afitsoky ny malaso. Tsy tokony hiandry ela intsony ny filoham-pirenena satria fantany ny toe-java-misy any, hoy ny Lehiben’ny faritra Ihorombe, Mosa Fernand.
Vato namono olona teny Ampamarinana Ny doboka tafondro tanaty rotsak’orana no antony ?
Tsy manapoaka zavatra na vato fahavaratra ny Ntaolo. Efatra ny maty, 11 no naratra mafy nihotsahan’ny bolongam-bato izay nizara dimy ka nandravarava tokantrano 5,
Trano 5 rava, olona 4 maty Hafindra toerana ny mponin’Ampamarinana
Voasokajy ho faritra tandindonin-doza ny faritra rehetra eny Ampamarinana noho ny fisian'ny triatra miisa 24 amin'ireo haram-bato eny an-toerana. Efa niaraha-nahita ireo loza nisesisesy
Vola fanampiana ny taksibe Mbola ny faran’ny taona no mandeha amin’izao
Mitaraina ireo mpamily taksibe eto amintsika amin’izao fotoana. Ankoatra ny fitohanana mahazo azy ireo isan’andro na eto an-drenivohitra na any ivelany dia mihamiakatra hatrany ny vidin’ireo kojakoja ilaina amin’ny fiara amin’ny andavanandro.